5 Izimiso Zokuklama Iwebhusayithi Enhle - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
5 Izimiso Zokuklama Iwebhusayithi Enhle
Uzomangala ukwazi ukuthi kunamawebhusayithi acishe abe yizigidi eziyizinkulungwane ezimbili emhlabeni wonke, yize amasayithi asebenzayo ecishe abe yizigidi ezingama-400. Kodwa lelo kuseyinani elimangalisayo. Amawebhusayithi anezici ezimbalwa eziwenza akhange kubabukeli. Yiqiniso, kubantu abaningi, indlela isayithi elikhanga ngayo kumuntu incike,... Funda kabanzi
I-Afrika Izoba Yindawo Elandelayo Yokugxila Kwabashisekeli Bokutshalwa Kwezimali
Imiklamo yobucwebe bendabuko i-Evergreen
Uzomangala ukwazi ukuthi kunamawebhusayithi acishe abe yizigidi eziyizinkulungwane ezimbili emhlabeni wonke, yize amasayithi asebenzayo ecishe abe yizigidi ezingama-400. Kodwa lelo kuseyinani elimangalisayo.
Amawebhusayithi anezici ezimbalwa eziwenza akhange kubabukeli. Yiqiniso, kubantu abaningi, indlela isayithi elikhanga ngayo kumuntu incike, okusho ukuthi iyahluka kumuntu nomuntu. Ngokusho kweLas Vegas Web Design Company, izici ezivamile zewebhusayithi ezikhanga abantu abaningi yilezi ezilandelayo:
Idizayini enembile, esemfashinini kanye nolwazi oluhle lomsebenzisi
Okuqukethwe okugunyaziwe nokuhambisanayo
Izithombe ezinhle zomkhiqizo nezincazelo
Ukusetshenziswa kwenkundla yezokuxhumana njengesandiso sewebhusayithi
Kufanele futhi ucabangele izakhi ezibonakalayo, njenge:
Sekukonke, impumelelo yewebhusayithi incike ekutheni isiza sakhiwe kanjani. Nakuba kunezici eziningi ezingokwemvelo nezinto ezibonakalayo ezifaka isandla ekukhangeni kwewebhusayithi, lula ukuhamba ingesinye sezici eziphezulu eziheha ababukeli.
Ngakho-ke, noma ngabe ungumklami wewebhu osanda kuzalwa noma isivakashi sewebhu esifuna ukwazi futhi esinentshisekelo ezintweni ezihlukene, kuyinzuzo ukwazi imigomo ephezulu yokuklama iwebhu eyenza isayithi libukeke lilihle.
Kungani udinga iwebhusayithi eklanywe ngobungcweti?
Iwebhusayithi yebhizinisi ingubuso benkampani. Ngakho-ke, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi zonke izakhi ezidingekayo nezici zewebhusayithi zihlanganiswa ekwakhiweni. Amakhasimende akho avamile nangase abe khona kufanele akwazi ukuthola ngokushesha futhi akhombe iwebhusayithi yakho ukuze aqinisekise ukuqwashisa komkhiqizo okuqhubekayo.
njengoba I-Las Vegas Web Design Company uthi, ukucatshangelwa okubaluleke kakhulu ukuhlola ukuthi iwebhusayithi iyasebenza ngempela, noma ngabe idizayini ilula. Iwebhusayithi eyakhiwe kahle futhi esebenziseka kalula ithandeka kakhulu kubasebenzisi. Ukusebenza kwesayithi kuncike ekutheni lisebenza kangakanani.
Udinga ochwepheshe ukuze baklame iwebhusayithi enhle njengoba benolwazi emikhakheni eyahlukene yokuthuthukiswa komklamo wewebhu. Ukusebenzisana kwabo yikho okwenza umklamo uhlangane futhi ungaguquki. Ukuqasha iqembu elichwepheshile lokuklama iwebhusayithi kuqinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho lizokwenza lokhu:
Nikeza izivakashi ngolwazi olufanele nolwamanje
Iyafinyeleleka noma nini
Izimiso ezinhlanu zomklamo omuhle wewebhu
Inkampani yakho idinga ukubeka umbono omuhle kakhulu phakathi kwabasebenzisi be-inthanethi. Kufanele bafunde ngokushesha mayelana nenkampani/ibhizinisi lakho emizuzwaneni embalwa yokuqala ngemva kokuthola isayithi lakho. Futhi ufuna lowo mbono ube muhle ukuze bahlale ekhasini.
Izici ezinhle zokuklama iwebhusayithi:
Umklamo olula usengcono kakhulu
“Idizayini elula” isho ukuthi ikhasi lewebhu aligcwele izici ezimbalwa ezingaphazamisa inhloso eyinhloko yesayithi lakho. Isivakashi kufanele sibone zonke izici ezibalulekile ezizodonsa ukunaka kwaso, njengokubopha ikhophi ifonti nosayizi okufundeka kalula, inhlanganisela yombala nesithombe somkhiqizo ngokulungiswa okuphezulu.
Iwebhusayithi yakho inamakhasi ambalwa. Isitayela sokuklama nezinto ezingaguquki, njengelogo yenkampani yakho, imibala, ukuthayipha, osayizi befonti, izinkinobho, izihloko nezihlokwana, ulwazi lwebhizinisi (ikheli, imininingwane yokuxhumana) kufanele kuhlale kunjalo kuwo wonke amakhasi.
Ukuhambisana namadivayisi eselula
Abantu abaningi namuhla basebenzisa amadivaysi abo eselula ukusesha iwebhu. Ngakho-ke, amawebhusayithi adinga ukuhambisana nezikrini ezincane, nazo ezinosayizi abahlukene. Kungenye yezinzuzo zokuqasha umklami wewebhusayithi ochwepheshe. Banolwazi lokuvula iwebhusayithi elungiselelwe amakhompuyutha edeskithophu nawekhompuyutha ephathekayo ukuze ivumelane nezimo futhi iphendule osayizi abahlukahlukene besikrini.
Isithombe nephalethi yombala
Inhlanganisela yombala efanele yenza iwebhusayithi ikhange. Ngokuvamile imibala kufanele ihambisane nemibala yakho yenkampani, eyenza ibhalansi. Kufanele kube nezikhala ezimhlophe ukunikeza amehlo ezivakashi indawo yokuphumula. Kubalulekile ukunciphisa inani lemibala nezithombe noma ihluzo futhi uyisebenzise ngokuphumelelayo ukuze ugcizelele okuqukethwe okubalulekile futhi wenze izinto zibonakale zicacile. Izithombe zomkhiqizo kufanele zithathwe umthwebuli wezithombe ochwepheshe, ngokulungiswa okuphezulu ukuze izivakashi zikwazi ukwazisa ngokugcwele umkhiqizo.
Ukulayisha okusheshayo nokuzulazula okulula
Abaklami bewebhu abavela eLas Vegas Web Design Company batusa ukuthi iwebhusayithi kufanele ilayishe phakathi kwamasekhondi amabili. Umehluko wamasekhondi ambalwa ungasho ukushiywa yisivakashi. Ngendlela efanayo, lapho izivakashi zithola kunzima ukuzulazula kusayithi lakho, zizohamba, ngisho noma unolwazi oludingayo.
Lezi zimiso zizosiza ukwenza isayithi lakho lisebenze futhi likhange. Ukudala iwebhusayithi esebenziseka kalula enomklamo ohlanzekile kuzokwenza isayithi lakho libe yimpumelelo.
Izinhlobo Zeziqinisekiso Zokuphahla Kwezentengiso Zokuvikela Ibhizinisi Lakho